Maqaal: Dadka Soomaaliyeed In ka Badan 26 Sano Waxaa Ehel u Noqday Xaalad Cakiran Sida : Dowlad La’aan., Colaad., Abaaro., Darxumo iyo Gunnimo, Xaaladda Sidaas ah, Baarlamaanka Cusub ee Soomaaliya Wax ma ka Bedeli karaa. BY Dr Dahir Nur Jama ( Dr Truman) | Saadaal Media
Maqaal: Dadka Soomaaliyeed In ka Badan 26 Sano Waxaa Ehel u Noqday Xaalad Cakiran Sida : Dowlad La’aan., Colaad., Abaaro., Darxumo iyo Gunnimo, Xaaladda Sidaas ah, Baarlamaanka Cusub ee Soomaaliya Wax ma ka Bedeli karaa. BY Dr Dahir Nur Jama ( Dr Truman)
Xaaladda Dalka Soomaaliya waa waddankeena waa kii aan ku dhalanaye haddii aan nahay Soomaali maryooloeey,laakiin anigu aan leeyahay haddii aan nahay Soomaali maanyar ama maxkaxyar. Waddanku wuxuu ku sugan yahay xaalad cakiran isla markaana leh welwel iyo xanuun badan. Xalaadda xanuunka badan waxaa lagu soo jirey 26 sano welina waa lagu jiraa,laakiin welwelku waa mid ku saabsan Mustaqbalka waddanka oo u muuqda mid ku sii dhacaya xaalad shaki gelineysa jiritaan dowladnimo soomaaliyeed,haddii aysan jiriinna dowlad soomaaliyeed taas micnaheedu waxaay noqoneysaa ineysan Jiri doonin qaran Soomaali leedahay waana xaaladda abuuraysa welwelka laga qabo Mustaqbalka Soomaaliya.
Nin la yiraahdo Charles BUKOWSKI wuxuu yiri “ Quote” The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence” , dadka caqliga badan waxaay shaki badan ka qabaan dhibaatada dunida ka jirta, halka kuwa doqomada ah ay ka buuxdo kalsooni badan.
Xaaladda Soomaaliya ku sugan tahay waqtigaan xaadirka ah, waxaay la mid tahay Aragtida Charles Bukowski, sidaa awgeed Baarlamaanka Soomaaliyeed oo aan ogahay sida lagu soo xulay waayo nadaamka aad ku soo baxdeen inaad noqotaan Baarlammaan Soomaaliyeed isla markaana matashaan shacabka Soomaaliyeed ma aheyn doorasho,laakiin waxaay aheyd soo xulis ama xulasho waayo doorasho waxaay u baahan tahsy iney marto nadaam dastuuri ah. Si kastaba oo aad ku noqoteen Xildhimaanadii Soomaaliyeed, Soomaalidu waxaay tiraahdaa MIRO Berdi Duub-duub baa loo LIqaa.
Sida cinwaanka maqaalkeygu yahay Baarlamaanka Cusub ee Soomaaliya wax ma ka bedeli karaa xaaladda cakiran ee ka jirta Soomaaliya? Jawaabtu waxaay tahay haddii baarlamaankaan cusub ka duwan yahay kii ka horeeyey waa HAA. Laakiin haddii Baarlamaanka 10-aad la mid noqdo Baarlamaankii 9-aad ee ka horeeyey waxaay noqon doontaa ineysan xaaladda Soomaaliya waxba iska bedelin, iney ka sii hooseyso mooyee.
Hawlaha ugu horeeya ee horyaalla Baarlamaankaan waxaa waaye doorashada Hoggaanka dalka sida Madaxweynaha iyo Guddoonka Baarlamaanka,waana arrin xasaasi ah isla markaana leh muhiimad gaar ah, ayna Ummadda Soomaaliyyeed gudahaiyo dibeddaba indhaha ku hayaan waxaayna eegayaan shaqsiyaadka aad u doorataan Hoggaanka Dalka .
Cidda aad u doorataan Hoggaanka Dalka waxaay noqon doontaa mirihii laga dhaxlay soo xulistiinii, isla markaana noqon doonta mid rajo gelisa Shacabka Soomaaliyyed ee ay haysato dhibaatada baahsan ama mid rajo beel iyo quus ku abuurta ummadda Soomaaliyeed. Muddo yar ka hor bilihii ugu dambeeyey sannadkii dhammaaday 2016 waxaan dhageysanayey Odeyaal dhaqameed ku nool Soomaaliya inta Media-yada soo hor istaagay oranaya waxaan ku Biiraynaa “ Kilinka 5-aad ee Ethoipia” . Haddii ay sii socoto xaaladdaas QUUSTA ABUURTEY, maxaay tahay rajada laga filan karo MUSTAQBALKA Soomaaliya? Taas micnaheedu wuxuu yahay inuu Mugdi ku jiro MUSTAQBALKA Soomaaliya, haddii aysan Soomaalidu la imaan wax ka duwan wixii lagu soo dhaqmayey 26 sano.
Qabashada Hoggaanka Dalka waxaa isu soo taagay muwaadaniin badan lagana yaabee iney sii kordhaan tiradoodu, waxaa lagu tartami doono waa Guddoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha mustaqbalka Soomaaliya afarta sano ee soo socota.
Damcan muwaadin kasta oo Soomaali ah wuxuu xaquuq Dastuuri ah u leeyahay in la doorto, waxna uu doorto, ’ uu buuxiyo sharuudihii Dastuuriga ahaa.
Haddaba ummaddaas Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan gudaha iyo dibeddaba xaaladda ay ku sugan yihiinna la mid tahay CEELNA UMA QODNA,CIDNA UMA MAQNA,waa dadka noocaas ah kuwa aad u qaadeen musuuliyadda uguna dhaarateen Kitaabka Qur’aanka ah inaad xilkiina u gudan doontiin si ay ku jirto daacadnimo,caddaalad iuo Ilaah ka Cabsi.
Waxaa loo baahan yahay inaad ka fogaataan caadifadda Qabyaaladda, caadifadda kooxaysiga iyo tan danta gaarka ah, isla markaana inaad qameyn ku sameysaan dadka xil doonka ah sida Madaxweynaha iyo Guddoonka Baarlamaanka.
Tusaale Guddoonka Baarlamaanka waxaa u isu soo taagay shaqsiyaad, sidoo kale waxaa Jira musharaxiin badan iney qabtaan xilka Madaxweynaha Soomaaliya afarta sano ee soo socota. Sidaa awgeed su’aashu waxaay tahay sidee lagu kala xulan karaa ama lagu heli karaa shaqsigii ugu macquulsanaa inuu noqdo Guddoonkii Baarlamaanka ,sidoo kale Madaxweynaha, taas waxaa lagu heli karaa in la qaymeeyo musharaxiinta dhinac kastaba ha ahaadeene. Tusaale Nin Saynisyaghan ah baa wuxuu yiri waxa CILMIGA la yiraahdo haddii uusan aheyn wax qurux badan aniga dan igama hayso, Su’aal baa la weydiiyey aheyd side Cilmiga ugu tilmaami karnaa Qurux waayo Qurux waxaan ku tilmaami karnaa wixii ishu qaban karto ama la taaban karo sida Gabar qurux badan, Guri qurux badan, ubax qurux badan, Miis qurux badan iyo wixii la mid ah!
Saynisyahan kii wuxuu ku jawaabay Tusaale waxaan dooneynaa inaan xal u helno hal arrin ama one case, laakiin arrintaas waxaa lagu xalin karaa siyaabo kala duwan laga yaabee ugu yaraan in xalkeedu ku Jiro ilaa Lix qaab oo kala duwan mid kastana waa xal, laakiin marka la is barbardhigo dhammaantood , mid mid ka md ah baa waxaay noqoneysaa midda ugu wanaagsan, taas baa waxaay noqotay middii ugu qurux badneyd sidaa ayaa cilmigii loogu sifeeyey qurux.
Arrintaan waxaan ula jeecdaa dhammaantood muwaadaniinta isu soo taagay Hoggaanka Dalka iney qabtaan marka la is barbardhigo waxaa Jiraya kala duwaanaansho, shakina Kuma jiro taas adinkaa la idinka doonayaa inaad u fekertaan si Phylosophy ah kalana saartaan dadkaan is dulsaaran iskuna xaquuqda noqday haddana kala duwan, si loo helo Hoggaan tayo leh qaybna ka qaadan kara sidii Dadka iyo Dalka loo samata bixin lahaa. Waayo in la waayo Dowlad hanata dalka muddo ka badan 26 sano waa laga yaxyaxo lagana xumaado, dadyoow kale iska daaye ETHOIPIANKA IYO KENYATIGA kaftan iska daaye, haddii ay iga soo horbaxaan dhulka ayaan hoos u fiiriyaa waayo waa karaamo darro iyo ilhaano weyn iney noo noqdaan role model, noo taliyaan.
SIdaa awgeed rajada ummadda soomaaliyeed ama masiiurkii soomaaliya gacantiina ayuu ku jiraa, kama hadlaayo awoodda Ilaahay taas waa mid gaar ah. Waxaan sugeynaa, dadka soomaaliyeedna idinku qaymeyn doonaan waa shaqsiyaadka aad u dooran doontaan Hogganka dalka, waxa ugu horeeya la idinku cabiri doono waa doorashada Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya, ma ahan inaad u aragtaan wax sahlan, haddii kale sidii Baarlamaankii idin ka horeeyey ayaa hawl gab la idinbka dhigi doonaa iyo kuwii ka horeeyey.
Madaxweynaha aad soo waddaanna waxaa laga cabbir qaadan doonaa Guddoonka Baarlamaanka aad dooran doontaan.
WQ BY Dr Dahir Nur Jama ( Dr Truman)